Romelu Lukaku oo arrintan kaga mahad celiyay taageerayaasha kooxda Inter Milan – Gool FM
(Milan) 15 Jan 2020. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Romelu Lukaku ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii weyneyd Nerazzurri ay kaga gaartay kooxda Cagliari tartanka Coppa Italia.
Kooxda uu hoggaamiyo tababare Antonio Conte ee Inter Milan ayaa waxay xalay 4-1 kaga adkaatay dhigeeda Cagliari kulan qeyb ka ahaa tartanka Coppa Italia, iyadoo ay goolasha kooxda Nerazzurri ay u kala dhaliyeen xiddigaha kala ah Lukaku, Borja Valero iyo Ranocchia.
Romelu Lukaku ayaa kaddib markii ay ciyaarta soo idlaatay wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Maanta si fiican ayaan u ciyaarnay, waxaan ku faraxsanahay guushaan aan gaarnay, waana inaan hada dareenkeena u jeedinaa horyaalka markale”.
“Waa inaan u mahadceliyo asxaabteyda, tababaraheyga, shaqaalaha kooxda iyo taageerayaasha, sababtoo ah maalintii iigu horeysay ayey i caawiyeen, qof walba oo halkan jooga waxay iga caawisay horumarka, sidoo kale waxaan caawin karaa kooxda”.
“Waxaan u ciyaarayaa inaan caawiyo kooxda, isla markaana aan siiyo wax walba ee aan ku heysto garoonka dhexdiisa, waxaan u arkaa in taageerayaasha ay jecelyihiin arrintaas, waa inaan ku socdaa wadadan, isla markaana aan dhaliyaa goolal badan”.
Intaas kaddib Romelu Lukaku ayaa wuxuu ka hadlay loolanka ay ugu jiraan xilli ciyaareedkan ku guuleysiga horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga wuxuuna yiri:
“Ma doonayo inaan ka hadlo horyaalka Talyaaniga, haatan waxaan ka fekerayaa kulanka soo aadan ee Lecce”.